Ixabiso eliphantsi leDiskhi ye-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator ngomatshini ophethe abaThengisi abaPhezulu kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Idiski yeOrganic yeComputer kunye neComputer Granulator Umatshini (ekwabizwa ngokuba yipleyiti yebhola) yamkela yonke iarc setyhula, kwaye inqanaba lokulinganisa linokufikelela ngaphezulu kwe-93%.
Yintoni i-Disc / Pan Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator?
Olu ngcelele idisk Ixhotyiswe ngemilomo emithathu ekhupha umlomo, iququzelela ukuveliswa okuqhubekayo, inciphisa kakhulu amandla abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kwabasebenzi Isinciphisi kunye nokusetyenziswa kwemoto ekusebenziseni ibhanti eguqukayo ukuqala ngokutyibilikayo, ukuthoba isantya kwimpembelelo kunye nokuphucula ubomi benkonzo yezixhobo. Umgangatho weplati womelezwa bubuninzi beepleyiti zentsimbi eziqaqambileyo, ezizinzileyo kwaye azizange zikhubazeke. Isixhobo esifanelekileyo sesichumiso somgquba kunye nesichumisi esidityanisiweyo, esilelwe ngesiseko esityebileyo, esinzima nesomeleleyo, ngenxa yoko asinazo iibholiti ze-anch kunye nokusebenza ngokugudileyo.
Iqondo lepani yokugcoba linokuhlengahlengiswa ukusuka kwi-35 ° ukuya kwi-50 °. Ipani ijikeleza kwi-engile ethile kunye tye eqhutywa yi-motor ngokusebenzisa reducer. Umgubo uya kuphuma kunye nepani ejikelezayo phantsi kwengxabano phakathi komgubo kunye nepani; kwelinye icala, umgubo uya kuwa phantsi komxhuzulane. Kwangelo xesha, umgubo uyatyhalwa kumda wepanini ngenxa yamandla e-centrifugal. Izinto zomgubo zihamba ngomkhondo othile phantsi kwale mikhosi mithathu. Ngokuthe ngcembe iba bubungakanani obufunekayo, emva koko iphuphume ngumda wepanini. Inezinto ezilungileyo zexabiso le-granulating ephezulu, i-granule efanayo, amandla aphezulu, ukusebenza ngokulula, ukugcinwa okufanelekileyo, njl.
Ungasicwangcisa njani isichumisi esidityanisiweyo ngokusebenzisa i-Disc Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator
Izinto ezi-1 ezimanzi: i-Urea, i-ammonium nitrate, i-ammonium chloride, i-ammonium sulphate, i-ammonium phosphate (i-monoammonium phosphate, i-diammonium phosphate, kunye ne-wharse wharse, ca), i-potassium chloride, i-potassium sulphate kunye nezinye izinto eziluhlaza ziyangqinelana (ngokutsho Imfuno yentengiso kunye nomhlaba ojikeleze iziphumo zovavanyo).
2.Raw izinto ukuxubana: Umxube wezithako kufuneka uxutywe ukuphucula ukusebenza kwesichumiso esifanayo segranu.
3.Ukususwa kwezinto ezingavuthiweyo: Izinto ezingafunekiyo emva kokuxubeka ngokulinganayo ziya kuthunyelwa kwi-granulator (i-rotary drum granulator, okanye i-roll extrusion granulator zombini zinokusetyenziswa apha).
Ukomisa i-4.Granulation: beka i-granulation kwisitya sokuomisa, kwaye ukufuma kwiigranu kuya komiswa, ukuze amandla e-granulation ande kwaye kube lula ukuwagcina.
Ukupholisa i-5.Granulation: Emva kokumisa, iqondo lobushushu le-granulation liphezulu kakhulu kwaye i-granulation kulula ukuyenza. Ngelixa emva kokupholisa, kulula ukupakisha ukugcina kunye nokuhambisa.
Ukuhlelwa kwe-6.Iparticle: amasuntswana okupholisa apholileyo aya kufakwa kumanqanaba: amasuntswana angafanelekanga aya kutyunyuzwa aphindwe ayilwe kwakhona, kwaye iimveliso ezifanelekileyo ziya kuhluzwa.
7.Ifilimu egqityiweyo: Iimveliso ezifanelekileyo zifakelwe ukunyusa ukukhanya kunye nokujikeleza kwegranules.
Ukupakisha imveliso egqityiweyo: Amasuntswana asongelwe ifilimu agcinwa kwindawo enomoya.
Iimpawu zeDiski / ipani ye-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine
1. Ukusebenza okuphezulu. Isetyhula umatshini wegranulation wamkela yonke isetyhula ubume bearc, inqanaba legranulation linokufikelela ngaphezulu kwe-95%.
I-2 yezantsi yeplate yegranulation yomelezwa linani leepleyiti zensimbi yemitha, ezizinzileyo kwaye azizange zikhubazeke.
3. Itafile yeGranulator ifakwe ngeglasi yeglasi enamandla amakhulu, inxamnye nokubola kunye nokuhlala ixesha elide.
4. Izinto ezingafunekiyo zinokusetyenziswa ngokubanzi. Ingasetyenziselwa i-granulation yezinto ezahlukeneyo eziluhlaza, njengesichumisi esimbaxa, amayeza, ishishini lamachiza, ukutya, amalahle, isinyithi.
5. Umsebenzi onokuthenjwa kunye neendleko eziphantsi. Amandla kamatshini mancinci, kwaye ukusebenza kunokuthenjwa; akukho ukubhobhoza kwenkunkuma ngexesha lenkqubo yonke yokugrumba, ukusebenza kuzinzile, kwaye ulondolozo lulungile.
Idiski / iPan Organic kunye neKhomputha yesichumisi seGranulator yeVidiyo
Disc / Pan Organic & Compound isichumisi Granulator Model Ukukhetha
Disc Ububanzi (mm)
Ukuphakama komphetho (mm)
Isantya seRotor (r / min)
Egqithileyo Isiguquli seGubu seCompound Fertilizer Granulator
Okulandelayo: Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compoundizer ye-Compactizer
IntshayeleloYintoni iFani yokuSebenza koBushushu obuPhezulu esetyenziselwe yona? • Amandla namandla: Isityalo samandla ashushu, Isityalo sokucoca inkunkuma, Isityalo samandla seBiomass, isixhobo sokubuyisela inkunkuma kwimizi-mveliso. • Ukunyibilikisa isinyithi: Umoya ovuthuzayo we-sintering ye-powder umgubo (Umatshini wokucoca), imveliso yecoke yomlilo (Furna ...
Intshayelelo Usetyenziselwa ntoni umatshini weRubber Belt Conveyor? Umatshini weRubber Belt Conveyor Machine usetyenziselwa ukupakisha, ukulayisha kunye nokothula iimpahla kwimpahla kunye nendawo yokugcina izinto. Inezinto eziluncedo kulwakhiwo olumbeneyo, ukusebenza ngokulula, intshukumo efanelekileyo, inkangeleko entle. Irabha Belt swa Machine nayo efanelekileyo fo ...
Intshayelelo Yintoni i-Screw Double Composting Turner Machine? Isizukulwana esitsha se-Double Screw Composting Turner Machine siphucule intshukumo ejikelezayo yokujikeleza ngokujikeleza, ke sinomsebenzi wokujika, ukuxuba kunye neoksijini, ukuphucula izinga lokuvumba, ukubola ngokukhawuleza, ukuthintela ukwenziwa kwevumba, ukugcina ...
Ukuphakamisa i-Hydraulic Composting Turner
Intshayelelo Yintoni i-Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine? Umatshini weHydraulic Organic Waste Composting Turner Machine ubamba izibonelelo zetekhnoloji yokuvelisa phambili ekhaya nakumazwe aphesheya. Isebenzisa ngokupheleleyo iziphumo zophando lwe-biotechnology ephezulu. Izixhobo zidibanisa umatshini, umbane kunye nehydrauli ...